Yintoni entsha kwiCisco Data Data - ICNA Data Centre
Iinguqu kwiCisco's Data Centre
200-150 DCICN: Ukuzisa iCisco Data Centre Networking
I-200-155 DCICT: Ukuzisa iCisco Data Centre Technologies
I-CCNP Data Centre
I-300-175 DCUCI: Ukuphunyezwa kweCisco Data Centre i-Unified Computing
300-165 DCII: Ukuphunyezwa kweCisco Data Centre Infrastructure
I-300-160 DCID: Ukuyila iCisco Data Centre Infrastructure
I-300-180 DCIT: Inkxalabo yeCisco Data Centre Infrastructure
Isikhungo soLwazi lweCisco: Iinkcukacha zophuhliso lweenkcukacha zihlala zikhula. Iingcali ze-IT ezisebenza ngesikhokelo sokugxilwa kwedatha zixhomekeke ekubeni zibe nezinto ezifanelekileyo kunye nokufunda okunika amandla ukugxilwa kwedatha ukusebenzisa i-IT njengesiqalo sokulawula isiseko (ITaaS).
Kulo nyaka, iCisco iqhubela phambili uphuculo olwenziweyo kwindlela onokufumana ngayo uqinisekisiwe ukuba usebenze ekugxilweni kwedatha. I-goliath yokunxibelelana iqhubekela phambili ekuphuculweni okuphawulekayo kuzo zombini i-Cisco Certified Network Associate (CCNA) kunye nokuhlolwa kwayo kweCisco Certified Network Professional (CCNP). yintoni eyenzeka ngoku, kwaye ukongezelela akufuneki kuthiwe into ethile malunga noko kwenzeka.
Ngethuba lokungakhange uliphulaphule kakuhle, i-CCNA Data Centre yeemviwo kunye noqeqesho kwiziko likaCisco liye laguqulwa ukuba lufake i-6.0. Ngo-Aprili 11, i-2017 yayinomhla wamva ukuthatha i-640-911 DCICN v1.0 kunye ne-640-916 DCICT v1.0 iimviwo.
Amagama ekhosi kunye nama-acronyms aqhubekile ngaphambili, kodwa inani ngalinye leemviwo liye lahlaziywa.
200-150 DCICN: Ukuzisa iCisco Data Center Networking
I-640-911 DCICN Uvavanyo lwaxhaswa yi-200-150 DCICN uvavanyo kwaye luye lwahlaziya iiklasi zeendawo zokuhlola ezizalisekileyo njengento ebalulekileyo kwaye zilungelelanise kwiCACNP Data Center, Centre Centre Data Data kunye nezinye iziqinisekiso zeCisco.
Kulo vavanyo olutsha, i-Cisco into ekhutshwe ngayo into ethile, i-ethernet inqanaba elisebenzayo, kunye ne-Cisco IOS, kunye nabanye. Kukho ukugxininiswa okwandisiweyo kwiingcamango zokunxibelelanisa kwedatha, iingcamango zokusasazeka ngokuphezulu, iingcamango zokugxilwa kwedatha, kunye neFiber Channel phezu kwe-Ethernet (FCoE).
Uvavanyo lwe-640-916 DCICT luye lwaxhaswa uvavanyo lwe-200-155 DCICT kwaye luye lwahlaziya iziqendu zendawo yokuhlola ezizalisa njengento ebalulekileyo kwaye zilungele kwiziko leNgcaciso leCCNP, iZiko leNkcukacha zeCACIE kunye nezinye iziqinisekiso zeCisco.
Kulo vavanyo olutsha, izihloko ze-Cisco ezikhutshwe kwiData yeZiseko ezibandakanya i-SAN, imodeli yokucwangciswa kwenethiwekhi, kunye namanqaku okulawula inethiwekhi, phakathi kwezinye. Kukho ukugxininiswa okwandisiweyo ekugqibeleni ubuchule kunye nenethiwekhi, ukucwangciswa kwamafu, ikhompyutha kunye nentlangano yesikhokelo sokugxilwa kwedatha, kunye ne-Application Centric Infrastructure (ACI).
I-CCNP Data Centre yeemviwo kunye noqeqesho kwiziko likaCisco liguquliwe ngoJanuwari 17, 2017. NgoJulayi 3, i-2017, unokuthatha iimviwo ze-V5 okanye iimviwo ezintsha ze-V6, ngokubhekiselele kwiinjongo zakho.
Amagama okufunda, ama-acronyms, kunye namanani omvavanyo atshintshile ukuba abe ngumbono olungaphezulu kweengxenye zengqesho kunye nemigqaliselo efunekayo kwimisebenzi edlalwa yiinkcukacha ze-IT ezijoliswe kwiinkcukacha.
Uvavanyo lwe-642-999 DCUCI iya kutyunjwa ngu 300-175 DCUCI uvavanyo kwaye uvuselele iiklasi zendawo yokuhlola ezizalisekileyo njengento ebalulekileyo kwaye zilungelelanise I-Cisco Data Centre, I-CCIE Data Center, kunye nezinye iziqinisekiso zeCisco.
Kulo vavanyo olutsha, iCisco ikhishwe into ethile yenkcazelo ethile kwiB-Series kunye ne-C-Series UCS Servers kunye ne-UCS Server Virtualalization Features, ukuxhaswa kunye nesithuba esiphezulu sokuhlola "Ukufezekisa Ukuhlanganiswa koLawulo oluPhakathi." Kukhona ukugxininiswa kwandisa kwi-robotization, ukhuseleko lokugcinwa kwedatha, kunye nenethiwekhi yokugcina ukugcinwa kwedatha, kuquka neFCoE.
Uvavanyo lwe-642-997 DCUFI ziya kutyunjwa ngophando lwe-300-165 DCII kwaye luye lwahlaziya iziklasi zeendawo zokuhlola ezizalisekileyo njengento ebalulekileyo kwaye zilungelelanise I-Cisco Data Centre, I-CCIE Data Center, kunye nezinye iziqinisekiso zeCisco.
Kulo vavanyo olutsha, iCisco ikhishwe into ethile yenkcazelo ethile I-Cisco Nexus ishintsha kunye neCisco NX-OS Software kunye nokunciphisa ukugxila kwi-network virtualization. Kukho ukwanda okugxininisiweyo kwintuthuko entsha, I-VXLAM, indlela yokuhamba, kunye nolwazi olunzulu kwiinkalo zokhuseleko lokusekwa kwedatha.
I-300-170 DCVAI: Iimpawu zengxelo yeCisco Data Centre Ukwenza i-Virtualization kunye ne-Automation
Uvavanyo lwe-300-170 DCVAI lutsha kwaye luvavanya iimpawu eziphathekayo ukulungelelanisa imisebenzi yokugxilwa kwedatha kunye nokwakhiwa kwekhompyutheni eqhutywe phambili kwizinto eziphathekayo zezinto eziphathekayo kunye nezibonakalayo. Ulwahlulo olutsha lweendawo zokuhlola luzalisa njengento ebalulekileyo kwaye lulungelelanise I-Cisco Data Centre, I-CCIE Data Center, kunye nezinye iziqinisekiso zeCisco.
Kulo vavanyo, kukho ingqalelo ekusebenziseni iikhompyutha, isiseko se-Infric infrastructure, i-Application Centric kwinqutyana ye-intanethi, kunye ne-Application Centric yolawulo lwezakhiwo kunye nokuqwalasela.
300-160 DCID: Ukuyila iCisco Data Centre Infrastructure
The 642-998 DCUCD kwaye 642-996 DCUFD iimviwo ziya kutyunjwa ngu 300-160 DCID vavanyo oluye lwahlaziya iiklasi zendawo yokuhlola ezizalisekileyo njengento ebalulekileyo kwaye zilungelelanise I-Cisco Data Centre, I-CCIE Data Centre, kunye nezinye ZeCisco.
Kulo vavanyo olutsha, i-Cisco iplani yefilosofi ekhutshwayo, isakhiwo sokugxilwa kwedatha, izifundo zophando, kunye nesiseko sokhuseleko. Iingcamango zengqwalaselo yeenkcukacha zihlanganiswe kunye kunye nokuhlanganiswa kunye nezicwangciso zocwangciso ezicwangcisiweyo zihlangene kunye novavanyo olulodwa, zibonakalisa iziphumo ezidibeneyo ezilindelekileyo kwiinkcukacha ze-IT ezijoliswe kwiinkcukacha.
The 642-998 DCUCD vavanyo kunye 642-996 DCUFD uviwo luya kutyunjwa ngu 300-180 DCIT uvavanyo kwaye luye lwahlaziya iikhompyutheni zeendawo zokuhlola ezizalisekileyo njengento ebalulekileyo kwaye zilungelelanise neCisco CCNP Data Center, Centre Centre Data Data, kunye nezinye iziqinisekiso zeCisco.
Kulo vavanyo olutsha, iCisco ikhishwe into ethile yenkcazelo ethile yee-B-Series kunye ne-C-Series UCS Servers, eyenza ukuba i-substance yokuhlala ihlanganiselwe kwindawo enye, "Uphando lweZiko leData liCwangcisa iiClatforms." Kukho ukugxininiswa ekuphandeni iinkqubo zokuhamba, ukuguqulwa kwezinto ezintsha, i-Application Centric Infrastructure (ACI) kunye neenkcukacha ze-LAN kunye ne-SAN, kunye nenkqubo yokukhuseleko.
Ukukukhokela phambili ekutshintsheni nokuza kutshintsha, i-Cisco yakha i-CCNP yeCandelo leNgcaciso yeZiko lokuHlola lokuHlola ongayisebenzisa ukuqonda ukuba yiziphi iimviwo oza kuzithatha.
Ezi ziviwo ziphuhliswa kukunika uqeqesho olugqityiwe kutshanje ukuyila nokusebenza kwezicwangciso zezinto eziphambili zokujoliswa kwedatha kunye nezinto ezintsha, kubandakanywa nokunxibelelana; umncedisi, umnxibelelwano, kunye nobuchule bokusebenza; ukugcinwa kweengcamango kunye nemigaqo-nkqubo; ziboshwe ndawonye; kunye nocwangciso oluqhutywayo lwenkqubo, konke okuqhubekayo.
I-CCNA Certification Certification - I-Guide epheleleyo
Izinto ze-5 omele wazi malunga neCisco CCNA Certification